Bhubaneswar - Puri - Konark - Iindwendwe zeNdwendwe e-India- Umqhubi we-Bhubaneswar - 91-993.702.7574
EBhubaneswar I-ofisi kaMongameli / efanayo Ihotele iVits / efanayo Ihotele I-Crown Ihotele iMefair Lagoon
Puri Ihotele yaseNaren Palace / efanayo Ihotele Fort Mahodadhi / efanayo I-Hotel Ananya Resort / efanayo Mayfair Waves
Ngokwenkolo onke amazwe ehlabathini lonke aphantsi kobuhlwempu; kodwa i-Indiya yodwa i-millionaire ne-Odisha yinto ecebileyo yonke.
Ukususela kwiTempile yasePuri Jagannath eyaziwayo kwiTempile yaseLongaraj eBhubaneswar, kwiKon Temple Sun ukubiza ngambalwa; Umhlaba oyingcwele ubamba amawaka emimangaliso yamandulo malunga nayo yonke inkolo. Into enhle malunga nePakethe yeeNdwendwe zoKhenketho ye-Temple yi-Odisha kukuba, abantu abavela kulo lonke ihlabathi, kungakhathaliseki ukuba nokholo lwabo baninzi ukubona nokufunda. Ngenxa yokuba "amaHindu" akuyona nje inkolo, yindlela yokuphila.
AC Dzire kubantu be-02, ii-AC Etios kubantu be-04 kunye ne-AC Innova kubantu ba-06.
Indawo yokuhlala kuquka ukutya kwasekuseni kuzo zonke iindawo.
Kuphela isidlo sikufake kwiIhotele iMayfair Wave, Puri.
I-01 igumbi eliphindwe kabini labantu be-02.
I-02 ngamagumbi aphindwe kabili kubantu be-04.
I-03 ngamagumbi aphindwe kabili kubantu be-06.
Ukuhamba ngeenqanawa kwisikebhe saseChilika eSatpada kwiiyure ze-03.
Imirhumo yesikhumbuzo, iimali zekhamera, iindleko zesikhokelo
USUKU 01: Kolkata / Delhi / Mumbai / Chennai / Hyderabad / Bengaluru - eBhubaneswar
Xa sifika kwi-Bhubaneswar Airport / iSitishi seSitishi uhambela kwihotele. Kamva u tyelele eNandankanan Zoo (Valiwe ngoMvulo). Ngobusuku eBhubaneswar.
USUKU 02: iBhubaneswar
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya eBhubaneswar ukutyelela kweetempileni kunye namaKhahla.IziTemples- i-Parashurameswar, i-Mukteswar, iLingaraj, iTempile yaseRaararani (ukusuka kwi-7th ukuya kwi-12th lama-AD). Amaplanga-Khandagiri kunye namagquma ase-Udayagiri Jain. Ngobusuku eBhubaneswar
USUKU 03: IBhubaneswar - Puri
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya ePuri ukuya kwindlela eya eDhauli (i-Ashokan Rock Edict no-Shanti Stupa), iPipili (Applique Work Village), iSashigopal (iRadha Krishna Temple) neRughurajpur / iNaikpatna (i-Painting Village). Ukufika e-Puri, Khangela kwihotele. Ukuhlwaya eNkundleni yeJagannath yeTempile ukuza kuthatha inxaxheba kwi-Live Aalati Darshan (abangewona amaHindu abavunyelwe ngaphakathi kwetempile). Ngobusuku ePuri.
USUKU 04: Puri - Konark - Puri
Emva kokutya kwasekuseni kuhambela kwiNdlu yeKonark Sun, i-ASI Museum (Valiwe ngoLwesihlanu), iTampeli likaRamchandi kunye neBhitshana laseChandrabhaga. Ngentambama inkululeko kwibala elwandle kunye nokuphumla kwi-market ye-beach Puri. Ngobusuku ePuri.
USUKU 05: Ukuhamba
Awuvumelekanga ngexesha lexesha leSeshini (ixesha le-Durga puja, ixesha elitsha kunye nexesha le-Chistmass, iiholide zeSizwe, i-RathaYatra Périod, ixesha le-Holi)
Yiba ngowokuqala ukuphonononga "iBhubaneswar - Puri - Konark" Rhoxisa impendulo
81 - = 75
Akukho Yemihla: 01 Night / 01 Day
₹8,500.00 Ngeza kwitshathi
₹5,499.00 Ngeza kwitshathi